विश्वभर कोरोना संक्रमणबाटज्यान गुमाउनेको संख्या २४ लाख ७७ हजार नाघ्यो, कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? Canada Nepal
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाटज्यान गुमाउनेको संख्या २४ लाख ७७ हजार नाघ्यो, कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ११ करोड १९ लाख ५७ हजार ४ सय ९४ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २४ लाख ७७ हजार ८ सय ३९ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा ८ करोड ७३ लाख १९ हजार ४ सय ३२ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ११ हजार १ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या २ करोड ८७ लाख ६५ हजार ४ सय २३ पुगेको छ । त्यसैगरी निको हुनेको संख्या एक करोड ८९ लाख ७३ हजार १ सय ९० पुगेको छ ।
त्यस्तै भारतमा हालसम्म एक करोड १० लाख ५ हजार ८ सय ५० कोरोना संक्रमित छन् भने एक लाख ५६ हजार ४ सय १८ ले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या २ लाख ४६ हजार ५ सय ६० पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड १ लाख ६८ हजार १ सय ७४ पुगेको छ ।
फाल्गुण १०, २०७७ सोमवार १०:३३:०६ बजे : प्रकाशित